निको नहुने रोगमा घरखेत बेचेर उपचार नगरौं, क्यान्सरलाई औषधिले मात्रै पुग्दैन - hamro Desh
केमो थेरापी छर्रा जस्तो, टार्गेटेड थेरापी गोली जस्तो !'
डा. देवकोटा पो सक्षम हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो चाहना र इच्छा अनुसार नै बेलायत जानुभयो । तर, त्यही प्रकृतिको रोग भएको मानिसलाई बेलायत जान सुझाव दिइयो भने त्यो परिवारको अवस्था के होला ? त्यसैले, यस्तो रोगको उपचार गर्दा विचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।